Lix bilood oo Apple Music ah oo bilaash ah iibsashada AirPods ama Beats | Wararka IPhone
Lix bilood oo Apple Music ah oo lacag la’aan ah si aad u iibsato AirPods ama Beats
Xayeysiin cusub oo loogu talagalay isticmaaleyaasha cusub ee iibsada AirPods, AirPods Pro, AirPods Max iyo Beats headphones ayaa goobta soo gala. Xaaladdan oo kale ma cadda haddii dalabka laga heli karo dhammaan waddamada maadaama dallacsiinta aysan ka muuqan websaydhka Apple ee Spain, ugu yaraan hadda. Waxa kale oo muhiim ah in sidaas la yidhaahdo kaliya waxay ku habboon tahay macaamiisha cusub ee Apple Music Markaa haddii aad hore ugu raaxaysatay bil bilaash ah adeegga muusigga qulqulka ee Apple, dallacsiintaani adiga kuma aha.
Xayeysiisyada joogtada ah ee Apple Music
Dhiirrigelinta maanta la dhaqaajiyay iyo tan waxaa lagu hawlgelin karaa 90 maalmood gudahood marka la iibsado badeecaddu waa mid ka mid ah kuwa badan oo ay shirkadda Cupertino fuliso. Adeegyada Apple sida caadiga ah waxay bixiyaan xayeysiisyada noocaan ah waqti ka waqti markanna waa markeeda Music Apple.
Waxa ugu fiican oo ku saabsan waxaas oo dhan ayaa ah markaad iibsato AirPods‌, ‌AirPods Pro‌, irAirPods Max‌, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro ama Beats Solo Pro, waxaad heli doontaa nus sano oo Apple Music ah oo u furan si aad ugu raaxaysato kumanaan heeso. Dareenkan, waxa muhiimka ahi waa adeegsadayaasha adeegso adeegga, degso ka dibna sii wad bixinta rukunka. Macaamiisha guulaysata ayaa saldhig u ah dhiirrigelinta noocan ah.
Maalmahan adeegyada qulqulka muusikada ee kala duwan waxay bixiyaan muusig aad u kala duwan dhammaantoodna waa dhammaantood si cadaalad ah xitaa marka la eego tayada iyo tirada muusigga la heli karo. Apple Music, Spotify ama Muusikada Amazon ayaa ah kuwa ugu waaweyn dalkeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Music » Lix bilood oo Apple Music ah oo lacag la’aan ah si aad u iibsato AirPods ama Beats
1Password hadda waxaa loo heli karaa in lagu kordhiyo Safari